ကလူ - - Tele RELAY တစ်ခုဂျနီဖာလိုပက်ဇ် "အပယ်ခံ" အဲလက်စ် Rodriguez ၏ status ကိုအဆုံးသတ်မှလုပ်ဆောင်နေသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် အပယ်ခံ "အဲလက်စ် Rodriguez" ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်၏ status ကိုအဆုံးသတ်မှလုပ်ဆောင်နေသည် "- လူတွေ
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် "အပယ်ခံ" အဲလက်စ် Rodriguez ၏ status ကိုအဆုံးသတ်မှလုပ်ဆောင်နေသည် - လူတွေ
Tele RELAY တစ်ခု 12 ဇူလိုင်လ 2019
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ပုံစေ့စပ်အဲလက်စ် Rodriguez Kylie Jenner, Idris Elba သူတို့မေလတွင် 1965 အတွက် Met မှာ Gala မှာစားပွဲတစ်ခု shared အဘယ်သူကိုနှင့်အတူအခြားအနာမည်ကြီးတွေအကြောင်းကိုလမ်းလည်းကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်စော်ကားပြောသောကြောင့်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ] လတ်တလောမကြာသေးမီအားကစားပုံ Rodriguez ဟာသူဌေးကြီးအနီရောင်နှုတ်ခမ်း Jenner ဘယ်လိုစားပွဲပြောသည် "ဟုသူမကရတတ်၏။ " နယူးယောက်ရန်ကီးလည်းအရည်အချင်းပြည့် Elba ၏ယခင် slugger "ဒီဝါယာကြိုးပေါ်အနက်ရောင်။ " တစ်ဦးအဆိုတော် "" ထိုအလိုပက်ဇ်များ၏မိတ်ဆွေကောင်း, Donatella Versace ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ "။
"ဟုသူမကသူ့ကိုပိုကောင်းသိရန်မျှော်မှန်းထားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ J.Lo အဲလက်စ်ဆန့်ကျင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အမျက် ထွက်. ," Fox News မှာသတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည် ။ ]
အဲဒါကိုသိသာ Rodriguez ကသူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောကွောငျ့လိုပက်ဇ်ကိုလည်းပွားခဲ့ကြပေမည်။ "A-လှံတံ၏မဖြစ်နိုင်ပြန်ပေါ်လာ" အမည်ရှိအဆိုပါအားကစားပုံဇာတ်လမ်း, ဒီအားထုတ်မှုအတွက်ကူညီဖို့ထင်ပေမယ့် Jenner, Elba နှင့်အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. မိမိအစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောမှတ်ချက်များဖြစ်လာခဲ့သည် အဆိုပါအာမခံစင်တာ အများပြည်သူတောင်းပန်ထုတ်ဝေရန် Rodriguez အတင်းအကျပ်။
ကဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘေ့စဘောအတွက် Steroid တစ်မျိုးအရှုပ်တော်ပုံများအတွက်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက် Rodriguez ၏အများပြည်သူ image ကိုအလေးအနက်ထားပျက်စီးခဲ့သည်။ အဆိုပါကြယ်ပွင့်ကစားသမား 14 အချိန်စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအပေါ် MLB မူဝါဒအချိုးဖောက်များအတွက်ရာသီ 2014 များအတွက်ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ တွင် 2017 အတွက်အင်တာဗျူးအတွက်, သူသည်မိမိအမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, သူ့ကို 40 သန်းသည်သူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုကုန်ကျနှင့်ဖြစ်ကောင်း Fame ၏ခန်းမထဲမှာမိမိနေရာမှခဲ့ကအသိအမှတ်ပြုသည်။
လိုပက်ဇ်ကသူ့ကို A-လှံတံအဘို့အအမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုပေး၏။ သူမမှ link တစ်ခု post မှပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Instagram ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြသောအခါ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်တစ်ဦးပုံပြင်ယနေ့တွင် အားကစားပုံပရိုဖိုင်းနဲ့တူရာ, သူ့စေ့စပ်ပရိသတ်တွေနဲ့ The ပုံပြင် Rodriguez "ဖို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြန့်မယ့်တစ်ကျော့ပြန်အလယ်၌ကြောင်းကိုဝင်အားကစားများကတားဆီးသူအများဆုံးစိတ်ပျက် cheater ကပြောပါတယ် အဓိပ္ပါယ်မဲ့၏အကန့်သတ်။ " အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုခွင့်ရှိသည်: "အပယ်ခံနှစ်ပြီးနောက်အဲလက်စ် Rodriguez လူကြိုက်အများဆုံး MLB ဖြစ်လာသည်။ သယံဇာတ။ "
"ဒါကြောင့်သင်မူကားယောက်ျား၏မာနထောင်လွှားနှင့်သင်နေ့စဉ်ဖြစ်လာကြောင်း," လိုပက်ဇ်သည်သူ၏ Instagram ကိုပို့စ်ကိုပြောသည်။
သမိုင်း Rodriguez ပို. ပို. ကောင်းမွန်စွာကြိုက်တယ်ဖြစ်လာရန်မိမိအကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်းလုပ်ကြံနှင့် "t အတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံ" ဘယ်လိုများစွာသောဥပမာကမ်းလှမ်းအမေရိကန်အားကစားနဲ့ pop ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အသက်အနှစ် 43 သူ ESPN နှင့် Fox အတွက်ဂျင်မီ Fallon နှင့်အတူ "ငါးမန်း Tank" ၏ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဟာသများတွင်ပါဝင်အားကစားဖြစ်ရပ်များ commented "ယနေ့ညပြရန်။ "
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူ 2017 အတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲကတည်းက Met Gala, အော်စကာဆုအတွက်နှင့်သူဟာ Emmy မှာလိုပက်ဇ် hunky အစောင့်အကြပ်ရဲ့ style ဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ ၎င်း၏ဂိမ်းရပ်ဆိုင်းမှု 162 ဂိမ်းဆေးဝါးများစဉ်အတွင်း ruminated တရားစွဲလူတိုင်းအပြစ်တင်ပေမယ့်မိမိကိုမိမိအလိုသောသူသည်, မိမိရည်းစားထိုသို့ပြီးတော့သိချင်စိတ်နှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်းသောဖော်ရွေရည်းစားဖြစ်လာခဲ့သည် ကအနီရောင်ကော်ဇောအောင်နိုင်သူ။
Instagram ကိုဂရုတစိုက်ဂရုတစိုက်စုံတွဲ၏အသစ်ကပြန်မဆောက်မိသားစုမှမေတ္တာပါမိတ်ဖက်များနှင့်ကျိန် ဆို. ပူဇော်ဘိုးဘေးအဖြစ်သူ့ကို၏ဓာတ်ပုံများကိုဖေါ်ပြခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုခိုင်ခံ့စေဖို့လိုပက်ဇ်နှင့် Rodriguez Rodriguez ကပြင်ဆင်မြေားကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
လိုပက်ဇ်နှင့်အတူလူတွေ Rodriguez နေဝင်ချိန်မှာကမ်းခြေအပေါ်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ပူဇော်ဖို့ဒူးထောက်, ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်သည်သူ၏သားသမီးလေးယောက်နှင့်အတူကူညီကြည့်ရှု decorating ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ .
ဤအပုံရိပ်များနှင့်အတူပြုလုပ် Rodriguez ခဲ့တာကိုမေ့လျော့ရန်လွယ်ကူသည် ဖောက်ပြန်၏ကောလဟာလများလည်းထွက်ပေါ် သူ၏ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်သူနောက်ဆုံးကျဆုံးခြင်းကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်အတွင်း တစ်ဦးအရုပ်ဆိုးဥပဒေရေးရာစစ်တိုက် သူတို့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်အဘို့အလျှော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းစင်သီယာ Scurtis နှင့်အတူ
နောက်ကျောဘေ့စ်ဘော၏ကမ္ဘာပေါ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်မှုကိုသုံးသူကစားသမားများ Fame ၏ဘေ့စဘောခန်းမမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားရမည်ရှိမရှိသေးဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သူ့ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြန်လည် Rodriguez ရပ်တန့်မထားပါဘူး။ "သင်ကယ့်ကိုခွက်တဆယ်ချင်လျှင်," USA Today ကလူအပေါင်းတို့သည်လိဂ်လျှောက်လုံးကစားသမား, မန်နေဂျာ, ယေဘုယျမန်နေဂျာနှင့်ပိုင်ရှင်များမှတစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆရာဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။
ချီကာဂိုအဖြူရောင် Sox ၏ပိုင်ရှင်, ဂျယ်ရီ Reinsdorf သူအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းယနေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောသည်။ လှံတံကိုအလုပ်ပြန်သွားပါ။
"ငါသည်သူတစ်ဦးအမှားလုပ်သောသူကသူမ၏ဘဝသတ်မှတ်မသွားပါစေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ထင်ပါတယ်" Reinsdorf ကဆိုသည်။ "လူတွေကမိမိကိုမိမိရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ထက်တိုင်ကြားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည်, ထိုကြောင့်မိမိအပွစျတငျဖြစ်ပြီးထိုသို့မည်သူမဆိုအပြစ်မတင်ကြဘူးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
"အဲလက်စ်နှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာကိုသူကစမတ်င်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Reinsdorf ဆက်ပြောသည်။ "ဟုသူကပိုကောင်းမယ့်အဘယ်သို့သူလူတွေကိုအကြံဉာဏ်ကိုတောင်းသိနှင့်အကူအညီတောငျးပါဘူးသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်သူ၏စေ့စပ်ခြင်း, ဘေ့စ်ဘောကစားသမားအဲလက်စ် Rodriguez, ဖေဖော်ဝါရီလ 91 24 အပေါ်ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ 2019e အော်စကာ Dolby ပြဇာတ်ရုံများအတွက်တင်ဆက်ထားပါသည်။ (ROBYN Beck / AFP / Getty Images)
ငါပွုဘယ်တော့မှအဖြစ်ထုနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ဘယ်လိုသိတယ် "ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ "သူငါ့ကိုငါရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ရန်ကြိုးစားသောအခါလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကူညီပေးသည်။
Rodriguez က၎င်း၏အပယ်ခံအနေအထားကို၏ဖြစ်နိုင်သောအဆုံးအပေါ်သူ၏ Instagram ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို၏မှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက် "သင်ကလေးကျေးဇူးတင်ပါသည်" ရေးသားခဲ့သည်။
ပရိတ်သတ်တွေ Rodriguez ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကို၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမိမိအခြမ်းမှာလိုပက်ဇ်မပါဘဲအဖြစ်ဝေးကရှိပါတယ်အဖြစ်တိုးတက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောတူသည်။ မိမိအ Instagram ကိုပို့စ်တွင်, တဦးတည်း wrote: "Jlo Arod ဖော်ရွေစေသည်။ "
နောက်ထပ် said: "သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လူကြိုက်များတစ်ဦးသောသူသည်သို့သော်သူနှင့်အတူလူတွေပိုပြီးထိမိထားပါတယ် !! #powercouple ။ "
VIDEO ။ Amel ကွေးသူ့မိဘများ၏ခွဲခြာအပေါ်ယျ ...
မေမေမကြာခင်လော်ရာ Smet? " C.
Michel Cymes : attention aux conseils alimentaires qui circulent sur Internet – VIDEO